सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभा’वितलाई सहयोग गर्दै नायिका श्वेता र पूजा । – Nepal Online Khabar
सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभा’वितलाई सहयोग गर्दै नायिका श्वेता र पूजा ।
असार ५, २०७८ शनिबार 745
काठमाडौ : नेपाली चलचित्रका नायिका पूजा शर्मा र स्वेता खड्काले सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभा’वितहरुलाई सहयोग वितरण गर्ने भएका छन् । शर्मा र खड्का मेलम्ची आएको बाढीका कारण प्रभा’वित भएकाहरुलाई सहयोग गर्न अगाडि सरेका हुन् ।
नायिका पूजा सिन्धुपाल्चोकका बाढी प्रभा’वितहरुका लागि शुक्रबार सहयोग वितरण गर्ने तयारी गरेकी छिन् । त्यस्तै, नायिका स्वेता खड्काले पनि मेलम्चीको समस्या सबैको समस्या भएको भन्दै शुक्रबार सहयोग वितरण गर्न जाने तयारी गरेकी छिन् ।
मेलम्चीको बहाव बढ्यो, बजारमा बाँकी रहेकाहरु माथि उक्लिए !
काठमाडौं : मंगलबारदेखि निरन्तर आएको मेलम्चीको बाढीले अझै विश्राम लिएको छैन । आज अपराह्न केही घटेको बाढी फेरि अहिले हेलम्बुबाट बढेर मंगलबारको जस्तै ठूलो आवाजमा आएको इलाका प्र’हरी कार्यालय हेलम्बुले जनाएको छ । मेलम्चीको बहाव बढेकाले बजारमा बाँकी रहेका मानिसहरु पनि माथि उक्लेका छन् ।
Prevआठ स्थानीय तहका सङ्क्रमितलाई होम आइसोलेसन किट वितरण
Nextकोपा अमेरिका : अर्जेन्टिनाको पहिलो जित, उरुग्वे पराजित
सुन्दर देखिनका लागि कुकुरको पिसाब पिउने गर्छिन् यी युवती !
काठमाडौं उपत्यकामै कम्युन घर निर्माण गर्दै ‘विप्लव’
एमालेको विपक्षमा नै रहेर हस्ताक्षर गर्नेहरु पार्टीका कार्यकर्ता होइनन् : अध्यक्ष ओली